Shiinaha QUARTZ DHAGAX Soo-saare iyo Badeecad | Montary
Dhumucdiisuna 18 mm / 20mm / 30mm
Habka Farsamada Waxaan ka samaysannaa dhagxaanta dhagaxda leh 'quartz', oo lagu jaro mashiinka ka dibna lagu nadiifiyo shaqaalaheena khibradda iyo khibradda leh.
Khibrad: Khibrad sanado ah oo la xiriirta been abuur ah, Montary waa xirfad iyo xirfad ku shaqaysiga soo saarista dhagaxyada macmalka ah iyo dhagaxyada dabiiciga ah. Shaqaalaheena intooda badani waxay leeyihiin khibrad 6 sano ah oo ku saabsan been abuur, way shaqeeyaan oo waxay ku koraan Montary, waxayna diyaar u yihiin inay caqligooda iyo khibradooda u hibeeyaan macaamiil kasta iyagoo samaynaya miiska dushiisa. Tayada: Montary waxay si qoto dheer u ogaatay in tayada ay tahay udub dhexaadka horumarka muddada-dheer. Sidaas awgeed waxaan ku adkeyneynaa 4 jeer kormeer, gabal gabal, hubi in qaladka la yareeyo ugu yaraan. Waqtiga: Waqtiga la keenayo, 20 maalmood oo shaqo hal weel 20ft ah. Adeeg: Waan ognahay waxaad rabto waana ognahay sida wanaagsan ee aan kuugu adeegi lahayn. - Waxaan haynaa 30 iibin oo ku sameeya adeegga VIP qaab xirfadaysan - Kumanaan nooc oo wax soo saar ah, midab ah, qaab ah, oo ku habboon macaamiisha hal-ku-iibsiga - Waa loo habeyn karaa iyadoo loo eegayo shuruudaha macaamiisha ee alaabooyin kala duwan - Qaybaha takhasuska gaarka ah, xirfadlayaasha hawlaha maraakiibta, waxaan ku siin karnaa gaadiidka ugu fiicanf
Soosaarka Waxsoosaarka ee Loogu Talagalay Top
Tallaabada 1 Goynta (Mashiinka Mashiinka Goynta Infrared)
Tallaabada 2 Goynta (Mashiinka Mashiinka Mashiinka Biyaha)
Tallaabada 3 Darajada 45 Goynta (Mashiinka Goynta Darajada 45)
Tallaabada 4 Nadiifinta (Manual nadiifinta)
Tallaabada 5 Chamfer (Buugga gacanta)
Tallaabada 6 Nadiifi oo Kormeer (Hubinta Buugga)
Tallaabada 7 Xirxirida (waxaa ku dahaadhan alwaax)
1. Maxay qabataa Montary? Montary waa xirfadle iyo khibrad soo saare iyo soo-saare aalado dabiici ah / dhagxaan dabiici ah iyo dusha sare, iyada oo in ka badan 10 sano loo dhoofiyo suuqa adduunka. 2. Maxay macaamiisha u doortaan Montary?
Montary dhibco adag:
1) Kala duwanaanta ballaaran ee ururinta midabada.
2) Marwalba kudhow kudhow isbedelka caalamiga ah.
3) Xoogga saar uruurinta ku saleysan caddaan iyo cawl ku uruurinta iyo uruurinta marbling / veined.
4) Tayo iyo adeeg heer caalami ah, qiime jaban oo Shiinaha ah.
5) 7 + 24 xiriir fudud iyo jawaab deg deg ah.
6) Labada dhagxaanta dhagxaanta iyo dusha sare ee prefabricated waxaa laga heli karaa Montary.
3. Waa kuwee waddammada ugu waaweyn suuqyada Montary? Dhagaxyada Montary dhagxaanta iyo dusha sare prefabricated waxaa inta badan loo dhoofiyaa USA, Australia, Canada, UK, Italy, Mexico, Dubai, Turkey, Brazil, South Africa, HongKong, Korea, Vietnam, Thailand, Malaysia, iwm
4. Montary waligeed ma ka qayb qaadatay bandhig kasta? Sannad kasta Montary waxay ka qayb qaadataa bandhigyada USA, Europe, Dubai, Brazil, Asia, iyo wixii la mid ah.
5. Montary ma leedahay awood ay ku samayso dhagaxa horay loo sii qorsheeyay ee mashaariicda? Haa, Montary waxay leedahay aqoon isweydaarsi been abuur ah oo leh nooc kasta oo qalab otomaatig ah loogu talagalay miisaska hore loogu diyaariyey ee loogu talagalay mashaariicda dhamaadka sare.
6. Macluumaad intee le'eg ayay macaamiishu ku siin karaan Montary si ay u sameeyaan samaynta dusha sare? Macaamiisha waa inay bixiyaan sawirro dukaan ama sawir gacmeed lagu qoray faahfaahinta cabbirka iyo muuqaalka geeska iyo tirada saxda ah.
7. Noocee noocee ah ayaa laga heli karaa Montary? Montary waxay awood u leedahay inay sameyso dhammaan noocyada astaamaha geesaha, sida Eased Polished, Half Bullnose, Full Bullnose, Bevel Edge, Radius Edge, Flat Laminated, Bevel Laminated, Radius Laminated, iwm.
8 Sidee Montary u xirxiraa dhagxaanta dhagaxa horay loo sii qorsheeyay? Montary waxay ku xirxiraysaa dusha sare ee horay loo sii qorsheeyay oo leh sanaadiiq adag oo alwaax ah iyo xumbo gudaha santuuqa si loo ilaaliyo.
9. Suurtagal ma tahay in la baaro waxyaabaha qarxa ee ku jira warshada Montary ka hor inta aan la rarin? Haa, dhammaan macaamiisha si diiran ayaa loo soo dhoweynayaa si loo baaro cargos ka hor inta aan la xirin.
10. Suurtagal ma tahay in lagu sameeyo OEM-ga Montary? Haa, Montary waxay ku bixisaa adeegga OEM adoo daabacaya Logo ama magaca shirkadda.
Hore: DHAQAALAHA DHALASHADA NANO
Xiga: MARBLE FARSAMO
Dhagaxa Quartz Artificial
Dhagaxa Quartz Calcutta
Dhagaxa Quartz White